Hal-xiraalaha Champions League: Maxaa Lagu Kala-saarayaa Kooxaha Iskaga mid noqda, Goolasha, Dhibcaha, Kulamadii ay is-arkeen iyo Goolashii ay Iska Dhaliyeen | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Hal-xiraalaha Champions League: Maxaa Lagu Kala-saarayaa Kooxaha Iskaga mid noqda, Goolasha, Dhibcaha, Kulamadii ay is-arkeen iyo Goolashii ay Iska Dhaliyeen
(05-12-2017) Kulankii ugu dambeeyey tartanka Champions League marxaladda Groupyada ayay caawa iyo habeen dambe kooxuhu iskaga hor imanayaan, waxaana siddeeda hormo kasoo bixi doona min 2 kooxood, taas oo ka dhigan in 32-ka kooxood ee tartanka ku jira ay 16 ka mid ahi u gudbi doonaan wareegga 16-ka, halka 16-ka kalena ay 8 ka mid ahi u degi doonaan tartanka Europa League, siddeeda kalena guryahoodii ku noqon doonaan.
Haddaba, waxa dhici karta arrin qariib ah oo aan inta badan lagu arag ciyaaraha Champions League, taas oo ay suurtogal tahay in mararka qaarkood la arko, laakiin ogow inuu sharci ka yaallo.
Shabakadda ciyaaraha ee CADALOOL, waxay raad-raac ku samaysay sharciga lagu kala saarayo kooxaha isku groupka ah ee isku dhibcaha, goolasha, guulaha, akhlaaqda, guul-darrooyinka iyo wax walba isku mid ka noqda, kuwaas oo loo baahan yahay inuu midkood soo baxo.
Sida loo kala saarayo
a) Waxa loo eegayaa ciyaarihii dhexmaray midkoodii badiyey.
b) Haddii ay isku mid noqdaan dhibcaha, labadii kulan ee ay ciyaareenna isku mid noqdaan, waxa loo eegayaa farqiga goolashii ay dhaliyeen.
c) Haddii ay isku mid noqdaan goolasha ay dhaliyeen, waxa loo eegayaa goolasha laga dhaliyey.
d) Haddii ay ka sinnaadaan goolasha laga dhaliyey, waxa la eegayaa goolasha ay ku dhaliyeen garoomada kale.
e) Haddii ay isku mid ka noqdaan goolasha dibedda, waxa loo eegayaa inta kulan ee ay badiyeen.
f) Haddii ay isku mid noqdaan kulamada badiska, waxa la eegayaa, kulamada ay garoomada martida kusoo badiyeen.
g) Haddii ay taana isku mid ka noqdaan, waxa loo eegayaa, rikoodhka akhlaaqda.
h) Haddii ay taana isku mid noqdaan, xalka ugu dambeeya ee lagu kala saarayaa, waa halka ay kaga jiraan qiimaynta UEFA iyo rikoodho laga ururiyey kulamadii u dambeeyey ee tartamada kala duwan.